Oday 77 Jir ah oo ka Qalin jabiyey Dugsi Quraan ku yaalla Kanada – XOGMAAL.COM
Oday 77 Jir ah oo ka Qalin jabiyey Dugsi Quraan ku yaalla Kanada
Ardeydan xifdinta Quraan Kariimka waxa u dheeraa duruuso kale
By Muriidi Baba	 Last updated May 9, 2019
Dugsiga Imaamul Shaafici ee magaalada Edmonton, Alberta ee Kanada ayaa waxa sanadkan ka qalinjabiyey 150 ardey oo uu ka mid yahay Deeqow Nuur oo 77 jir ah. Ardeydan ayaa xifdinta Quraanka Kariimka ah ka sokow waxa la barey siirada nabiga, nabad iyo naxariisi koirkiisa ha ahaatee, qurxinta farta carabiga iyo isticmaalka hadalka Soomaaliga ah.
Dugsiga Imaamul shaafici waa uu ku cusub yahay magaalada Edmonton, sidaas dartiisna waxa uu la yimid farsamooyin cusub oo ka duwan kuwii horey looga isticmaali jirey magaalada iyo degaanada ay Soomaalidu ku badan tahay ee qurbaha. Sida ay qireen qaar ka mid ah macalimiinti dugsiyada kale iyo culumaa-udiinki ka soo qaybgashey xafladi loo qabtey ardeyda 150 aheyd ee qalinjabiuneysay, hanaanka cusub ee uu dugsigan keenay waxa durba laga dareemay ardeyda, waalidka iyo waliba bulshada Soomaaliyeed ee Edmonton.
Sheekh Abuukar Nuur waxa uu ka mid yahay macalimiinta iyo culimada Edmonton, waxa uu sheegay in uusan dugsi noocan ah oo kale ah ku arkin Kanada oo uu mudo dheer dugsi ku dhigayey, ilaa iyo hadana uu ku dhigo. “Mar mar ayaan salaada ku tukadaa mowlaca dugsiga. Marka aan salaada dhameysto waxaan jeclaystaa in aan iska sii fadhiyo si aan u dhageysto sida quruxda badan ee ay af Soomaaliga wax ugu barayaan ardeyda”. Sheekh Abuukar ayaa intaas ku darey in af Soomaaligi uu iloobey uu dugsigan iyo macalimiintiisa kabarto.
Macalimiinta dugsiga iyo maamulkaba waa ay qirteen in nidaamkooda ku cusub reer Edmonton aan si fudud lagu qaadan. Macalin Maxamed Axmed Cali oo ah macalinka guud ee dugsiga ayaa sheegay inay waalidiintu ka kaxaysteen caruurti oo ay dhowr kaliya ku soo hartey marki hore. Macalinka oo arintaas ka taariikheeyey ayaa yiri, “Aniga oo fadhiyo oo ay dhagahaygu shan yihiin ayey waalidiintu yiraahdeen macalinkan cusub marabno, caruurna waxnooma barayo.” Balse marki la la qabsadey nidaamka cusub ayey ardeydi isa soo tartey.
Dugsiga Imaamul Shaafici ayaa xafladiisa ku qabtey musaajidka ugu da’da weyn dalka Kanada ee Al-Rashiid. Masjidka Al-Rashiid waxaa la aas aasey 1937-di.
Shir aan caadi aheyn oo u furmay Wasiirada Arrimaha Dibada ee Dalalka ka tirsan IGAD (Sawirro)
Soomaaliya oo ka qeyb galeysa Shir ka dhacaya Wadanka Shiinaha (Sawirro)